ချစ်တယ်ပြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ချစ်တယ်ပြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့
Posted by etone on Sep 25, 2012 in My Dear Diary, Relationships & Family | 78 comments
I love you ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေး တကြောင်းနဲ့ အေးခဲနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ၊ ပြန်လည် နွေးထွေး လာနိုင်စေတယ်လို့ ပြောလျှင် ၊ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ယုံရခက်မယ်ထင်ပါတယ် ။ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ အပြိုင်ဆိုင်များလှတဲ့ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုမှာ အရွယ်ရောက်ရတဲ့ ကျွန်မတို့တွေ ဘ၀အာမခံချက်နဲ့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် ၊ နေ၀င်နေထွက် ရုန်းကန်ရင်း အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ် ။
ဘိုးတော်ဘုရားလေးဘက်သွားတဲ့ ခေတ်ကလို အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ရှာရုံနဲ့တစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံး ထိုင်စားလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ ၊ မိသားစုတွင်းမှာတောင် ၊ လူတိုင်းနီးပါး တက်ညီလက်ညီ အလုပ်လုပ်ကြရတယ် ။ အလုပ်မလုပ်နိုင်လို့ အိမ်မှာနေတာတောင် ၊ အိမ်အလုပ်လုပ်ပြီး တာဝန်ကျေရတာမျိုးပါ ။
ကျွန်မတို့ မိသားစုလည်း အများနည်းတူ ၊ ကိုယ့်လှေကိုယ်ထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ၊ ရွေးချယ်မှူကိုယ်စီလုပ်လို့ အလုပ်ခွင်ဝင် အလုပ်လုပ်ကြရတယ် ။ အလုပ်ချိန်မတူညီတာမျိုး ၊ အလုပ်အတွက် အပြင်ရောက်နေတတ်တာမျိုးတွေကြောင့် ဘယ်သူမှ သတိမထားမိခင်မှာပဲ မိသားစု ဆက်ဆံရေး တစတစ ယိမ်းယိုင်လာခဲ့ပါတယ် ။ တိုင်ပင်စရာကိစ္စမျိုး ၊ သဘောထားတောင်းခံစရာကိစ္စမျိုး ၊ အသိပေးစရာကိစ္စမျိုးရှိလျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ရက်၊သုံးရက်လောက် ကြိုညှိမှသာ လူစုံမျက်နှာစုံမြင်ရတဲ့ အနေထားထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ချက်ချင်းပြောစရာရှိလျှင် တအိမ်တည်းနေပြီး ဖုန်းဆက်ပြောကြရတယ် ။ နံရံမှာ စာကပ်ပြီးပြောကြရတယ် ။ မိသားစုဝင်တိုင်း အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေလျှင် ၊ အဆင်ပြေတာပဲလို့ လက်ခံထားကြပေမယ့် ၊ တမိုးအောက်မှာ နေသူတွေ တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားကြတာ ၊ မရိပ်မိခဲ့ကြဘူးပဲ ။
ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ကိုယ်၊ စိတ်ဇောအပြည့်နဲ့ ရုန်းကန်နေရချိန် ၊ အတူရှိနေတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ခဏတာ မေ့သွားတတ်ကြပေမယ့် ၊ ပြသနာတစ်စုံတစ်ခုရှိတာမျိုး ၊ စိတ်အားငယ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ အချိန်မျိုးဆို ၊ ကိုယ်နဲ့ ထပ်တူ ခံစားပေးနိုင်မယ့် မိသားစုကို သိစိတ်ကရော ၊မသိစိတ်ကပါ တောင့်တမိတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီရက်ပိုင်း လူတွေရဲ့ ရှေ့တမျိုး ၊ နောက်တမျိုး ၊ ဆယ့်နှစ်မျိုးမချိုမချဉ်မျက်နှာတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်ဆက်ဆံမှူတွေကြား အတော်လေး စိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ် ။ လူကို လူလိုဆက်ဆံတာကိုပဲ လက်ခံနိုင်ပြီး ၊ မလိုအပ်ပဲ ချဲ့ ကားမြှောက်ပင့်နေတတ်တာတွေ ၊ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်ချင်တဲ့ သိမ်ဖျင်းတဲ့စိတ်တွေကို ရွံ့ မုန်းခဲ့တော့ ၊ စိတ်အခန့်မသင့်တဲ့ အဖြစ်တွေကြုံတိုင်း မသတီသလို ခံစားမှုမျိုးနဲ့ပေါ့ ။ ပြောဆို ဆက်ဆံနေရမှာကိုတောင် စက်ဆုပ်သလို ခံစားမိပြီး ၊ သီးခြားနေလိုစိတ်ဖြစ်ကာ စိတ်လေခဲ့မိပါတယ် ။ ဒီအချိန်တောင့်တမိတာ ၊ ကိုယ့်စိတ်ရင်းတိုင်း တထပ်တည်း မခံစားနိုင်လျှင်တောင် ၊ ကိုယ့်စိတ်ကို နားလည်နိုင်မယ့် စကားပြောဖော်ပါပဲ ။ တခြားလူမဟုတ်ပါဘူး အနီးဆုံးလူ အမေပါ ။ စိတ်ထဲသိပ်ဘ၀င်မကျတာတွေ ၊ အမေ့ကိုပြောပြပြီး ၊ ရင်ဖွင့်ခဲ့ချင်ပေမယ့် နားထောင်ပေးမယ့် အမေ မအားဘူးထင်လို့ မြိုသိပ်ခဲ့ရဖူးတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ အလုပ်ကိုယ်စီလုပ်ရင်း ကိုယ်နဲ့ အတူ တသားတည်းရှိနေမယ့် မိသားစုတွင်းဆက်ဆံရေး မနွေးထွေးတော့ပါလားဆိုတာ အရင်ဆုံး သတိထားလာမိတော့တယ် ။
မနွေးထွေးတော့တဲ့ ဆက်ဆံရေး ၊ နောက်ပိုင်းဆို ဒီထက်ပိုအေးခဲသွားတော့မှာပါ ။ မိသားစုအတွင်းက ပျော်စရာအချိန်တွေလည်း ၊ အလုပ်ကိုယ်စီလုပ်ရင်း ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားတော့မှာပါ ။ ဒါတွေကို ပထမဆုံး သတိထားခဲ့မိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေထဲ အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက ၊ ဆက်ဆံရေး နွေးထွေးစေဖို့ ပြန်ကြိုးစားမလား ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မဆိုင်သလို နေလိုက်ရမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေကြား ဗျာများခဲ့ပြန်တယ် ။
မိသားစုဆိုတာ ကိုင်းကျွန်းမှီကျွန်းကိုင်းမှီပါ ၊ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုလျှင်တောင် ကိုယ်ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း ၊ ကိုယ့်နောက်မှာ ထပ်ကြပ်မကွာရှိနေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုပါပဲ ။ ဒါကြောင့် မိသားစုတွင်း ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်နွေးထွေးအောင် လုပ်ဖို့ စတင်ကြိုးစားရပါတော့တယ် ။ မိသားစုအပေါ်မှာ ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြရင်း ၊ သူတို့ မြင်သာလာလျှင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ ကြိုးစားမိခဲ့တယ် ။
ပထမဆုံးတော့ အမေ့ဆီကို SMS ပို့ပါတယ် ။ ခါတိုင်းလို ရုံးကနေပြန်လျှင် နောက်ကျမယ် ၊ ဘာလေးဝယ်ထားပေးပါ ၊ ဘယ်ပစ္စည်းဘယ်နား ထားတာတယ် စတဲ့ ခိုင်းစေမှု၊ တိုက်တွန်းမှုပါတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစာလုံးလေးတွေသုံးပြီး ၊” မေမေ ဒီနေ့မိုးအရမ်းရွာနေတယ် ၊ ကျောင်းမှာသွားရင်းလာရင်း ချော်လဲတတ်တယ် မေမေချော်လဲမယ် သတိထားနော် ။ I love you ” ဆိုတဲ့ စာတိုလေး ပထမဆုံး ပို့ခဲ့ပါတယ် ။ စာလေးက သာမန်ပေမယ့် စိုးရိမ်မှု ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေအပြင် ၊ မပြောဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာလေးပါထည့်ရေးပေးတော့ အမေ့ရင်ထဲ တုန်ခါရိုက်ခတ်သွားတယ်ထင်တယ် ၊ သိပ်မကြာဘူး စာတစောင်ပြန်ရောက်လာတယ် ။ ” မေမေစာသင်ခန်းထဲမှာပဲရှိပါတယ် အပြင်မသွားဘူး ၊ သမီးလေးလည်း စက်ရုံထဲသွားလျှင် ချော်လဲမယ် ၊ I love you too” . တဲ့လေ ။ ပထမဆုံး စိတ်ဖွင့်ပြီးနွေးထွေးမှုနည်းနည်းထည့်ရေးလိုက်တဲ့စာ ၊ တန်ပြန်ခံစားရတဲ့ နွေးထွေးမှုကလည်း ကျေနပ်စရာအတိနဲ့ပေါ့ ။ အဲ့ဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ ၊ ဆုံဖို့ ခက်နေတဲ့သားအမိနှစ်ယောက် ၊ ညဘက်အချိန်မတော် တရေးနိုးအချိန်မှာထပြီး ၊ ပိတ်ရက်ကျလျှင် ဘယ်အကျီ င်္ဆိုင်သွားကြမယ်ဆိုတာမျိုးပြောပြီး စကားကောင်းခဲ့ကြတယ် ။ ပြန်အိပ်လို့မရ ၊ အိပ်ရေးတွေပျက်ခဲ့ကြပေမယ့် မိသားစုဆက်ဆံရေး အတွက် နွေးထွေးမှုတစ်ခုကို ရတာနဲ့ပဲ ကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မိတယ် ။ နောက်ရက်တွေမှာလည်း အလျဉ်းသင့်လျှင် သင့်သလို ဂရုတစိုက်စာတွေပို့ခဲ့ပါတယ် ။ အိမ်က အထွက်ရော ၊ အိမ်ပြန်မ၀င်ခင်ရော ၊ ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေချိန်အတွင်းရော SMS တွေပို့ခဲ့တယ် ။ စာပို့တိုင်း မပါမဖြစ်သုံးခဲ့တဲ့စာကြောင်းလေးကတော့ I love you ပါပဲ ။ သတိထားမိရသောက်က အမေ့ဆီက လာတဲ့ စာတိုင်းမှာလည်း ဒီစာကြောင်းလေးကိုအမြဲ လိုလို သုံးစွဲလာတာတွေ့ရတယ် ။ အခုဆိုလျှင် ကျွန်မတို့ သားအမိကြားက ဆက်ဆံရေးက ၊ မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးတင်မကပဲ ၊ တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက် သူငယ်ချင်းလို ဆက်ဆံရေးမျိုးအထိပါ ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ။ ပြောပြသမျှကို နားထောင်ပြီး ကောင်းဧ။် ဆိုးဧ။် ဝေဖန်ချက်မပေးပဲ ၊သူမ အယူဆကိုပြောပြကာ ၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ့်သဘောတိုင်းကိုယ်ဆုံးဖြတ်စေခဲ့တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးက ၊မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးထက် ၊ သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေးဆန်ဆန်ဖြစ်နေပေမယ့် ၊ အရင်အခြေနေထက်တော့ နွေးထွေးမှု အပြည့်ရှိခဲ့တယ်လေ ။
မိသားစုတွင်းမှာ အမေနဲ့ ပိစ်ဖြစ်ရုံလောက်နဲ့တော့ ကျွန်မ မကျေနပ်နိုင်သေးပါဘူး ။ တခြားသော အတူနေ မိသားစုဝင်တိုင်းကိုပါ နွေးထွေးစေဖို့ ကြိုးစားရပြန်ပါတယ် ။ အဖေဖြစ်သူကတော့ ၊ အဝေးကိုရောက်နေတာက တကြောင်း ၊ အမှန်တရားတစ်ခုအတွက် ငြင်းခုန်ရင်း ၊ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြန်ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပြရာက အဗျင်းခံရတဲ့အပြင် ၊ အာခံတယ် မလေးမစား ၊ ပြန်ပြောတယ်၊ ခြေရာတိုင်းတယ် လို့ စွပ်စွဲဒေါကီးပြီး ၊ သားအဖချင်း စိတ်ကောက်ရာက ပြန်ချော့မရပဲ တင်းနေတာက တကြောင်းမို့ ၊ သူနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ ၊ ထင်သလောက်မလွယ်သေးသလို ၊ အခြေနေလည်း မပေးသေးပါဘူး ။ အတူနေ မိသားစုဆိုလို့ အမေရယ် ၊ ကျွန်မရယ် ၊ အစ်ကိုတို့လင်မယားရယ် ၊ တူလေးရယ်ပဲ ရှိတာကြောင့် ချဉ်းကပ်ရလွယ်မယ့် အစ်ကို့ မိန်းမ (ယောက်မ)နဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေဖို့ ၊ ကြိတ်အကြံ ထုတ်ရပြန်တယ် ။
တအိမ်လုံးမှာ အစောဆုံး အလုပ်သွားပြီး နောက်အကျဆုံးမှ အလုပ်ပြန်ရတဲ့အတွက် ယောက်မမျက်နှာတောင် မမြင်ရတာ ၊ ဘယ်နှစ်ရက်မှန်း မသိတော့ဘူးလေ ။ ယောက်မနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ ဗျူဟာစတင်တဲ့ မနက်ခင်းမှာပဲ ၊ သူမ ရုံးသွားလျှင် ယူနေကြခြင်းတောင်းလေးထဲ ၊ ကိုယ်ကြိုက်လို့ဝယ်ပြီး မသုံးဖြစ်တဲ့ ကလစ်လေးတစ်ခုကို စာတိုလေးတစ်စောင်နဲ့ အတူ ထည့်ထားပေးခဲ့တယ် ။ “မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံတုံးတဲ့ အစ်မရေ” (ပြောမယ့်သာပြောတာ… ကိုယ်တိုင်တောင် ဆံပင်ကို ခါးကျော်အထိ မထားခဲ့ဖူးဘူး .. စိတ်ရှုပ်လို့ .. ) ။ “ဆံပင်ရှည်ကြီးမှာ ဒီကလစ်လေးနဲ့ ဆို အရမ်းလှမယ်ထင်လို့ ၀ယ်လာတယ် ။ I love you” . လို့ရေးထားခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီနေ့ က အိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့ပေမယ့် ၊ ယောက်မပြင်ပေးထားတဲ့ ထမင်း ၊ ဟင်းတွေကို အဆင်သင့်စားခဲ့ရတယ် ။ ထမင်း အုပ်ဆောင်းပေါ်မှာလည်း သူ့လက်ရေး ပိစိကွေးလေးနဲ့ ၊” ငါ့ညီမလေးပင်ပန်းလာတယ်ထင်လို့ ၊ ထမင်းဟင်း ပူပူနွေးနွေးချက်ပေးထားတယ် စားပြီးနားတော့ I love you “တဲ့လေ ။ နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာလည်း ၊ အပြင်ကနေပြန်လာတိုင်း သူမအတွက် ၊ ပိတ်စလေးတွေ ၊ cosmetic လေးတွေဝယ်လာပြီး ၊ သူမအခန်းထဲ ထည့်ပေးတာမျိုး ၊ သူမမြင်သာတဲ့နေရာမျိုးမှာ ၊ စာတိုလေးနဲ့ I love you ဆိုတဲ့ စာလေးရေးပြီး ချချထားပေးတဲ့နောက်ပိုင်း ၊ သူမဘက်က နွေးထွေးမှုတွေလည်း ပြန်ရခဲ့ပါတယ် ။ အခုဆိုလျှင် ၊ ကျွန်မ လုပ်ရမယ့် အိမ်အလုပ်တွေကိုပါ ကူလုပ်ပေးပြီး သူမဘက်ကလည်း နွေးထွေးမှုကို ပြနေပါပြီ ။ အရင်ကထက်စာလျှင်တော့ အိမ်မှာ ခြောက်တီးခြောက်ကပ်မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ကျွန်မ စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ပိုင်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ် ။ တစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ အစ်ကိုပါ ၊ တစ်ပိုင်းဆိုတာကတော့ ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးဖြစ်တဲ့ တူလေးပါပဲ ။
အိမ်မှာ ယောကျာ်းသားဆိုလို့ သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပေမယ့် သူများနဲ့ မတူအောင် သားအဖ နှစ်ယောက်စလုံး ရစ်ကြောရှည်တတ်ကြပါတယ် ။ စကားကို အထနကောက်တတ်ပြီး ၊ အရမ်းကို ဂျီကျတတ်သူများပါ ။ သူတို့ကို ချဉ်းကပ်ဖို့ ခေါင်းစားရပါတယ် ။ ပစ္စည်းဝယ်ပေးလျှင် ရတဲ့ အနေတဲ့ အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ အဆော့မက်တဲ့ တူလေးကို ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းက အာလာဒင် လိုက်ပို့ပေးရတော့တာပေါ့ ။ သူမမွေးခင်က အိမ်မှာ ဗိုလ်ကျနေခဲ့တဲ့ ကျွန်မနဲ့ ၊ မွေးလာပြီး အငယ်ဆုံးဖြစ်လို့ တအိမ်လုံး အချစ်ခံ အလိုလိုက်ခံရလို့ ဗိုလ်ကျနေတဲ့ တူလေးတို့ ကြာကြာပူးနေလို့ မရပါဘူး ။ အသက်ရွယ်နှစ်ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်စာ မက ကွာပေမယ့် …. ခဏခဏ ရန်ဖြစ်ရပါတယ် ။ မိသားစုနွေးထွေးအောင်သာ ၊ လာခဲ့တာ မျက်ခုံးတော့ လှုပ်မိပါရဲ့ ၊ အာလာဒင်ရောက်တော့ မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့အပြင် ၊ ကလေးအမေတွေကြားထဲ ၊ တော်ကြာမုန့်စားမယ် ၊ တော်ကြာ အိမ်သာသွားမယ်နဲ့ ၊ ကျွန်မနားထဲက လေထွက်ပြီး မူးနောက်လောက်အောင် ခိုင်းလို့ အားရမှ ၊ အာလာဒင် ပိတ်ခါနီးမှ ကုန်းပိုးပြီးအိမ်ပြန်မယ်ဖြစ်ပါရော ။ အိမ်က အာလာဒင်နဲ့ လေးငါးလမ်းလောက်ပဲ ခြားတာမို့ ၊မှောင်မှောင် မည်းမည်း ထဲ ကုန်းပိုးခဲ့ပါသေးတယ် ။ ငါးမိနစ်ပြည့်အောင်တောင် ကလေးမချီဖူးတဲ့ အဒေါ်က ၊ မနိုင်မနင်း ကုန်းပိုးထားပါလျှက် ငြိမ်ငြိမ်လိုက်မလာပဲ၊ လှုပ်ရွပြီး လိုက်လာရင်း ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို လှမ်းအကျော်မှာ ၊ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲနဲ့ ချော်လဲခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မက ဒူးပြဲရုံလောက်ပြဲပြီး တူလေးကတော့ လက်ဆစ်ခေါက်သွားရရှာတယ် ။ မိသားစု နွေးထွေးမှုအတွက် ၊ အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးစားနေတုန်း ၊အိမ်ရဲ့ အသည်းကျော်ကလေး ကျွန်မကြောင့် လက်ဆစ်ခေါက်သွားရတယ်ဆိုတော့ ၊ ကြိုးစားသမျှ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ပြီလို့တွေးရင်း စိတ်မကောင်းပဲ အိမ်ပြန်လာခဲ့ရတယ် ။ အိမ်ရောက်တော့ အထင်နဲ့ အမြင်က တခြားစီဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ် ၊ ယောက်မနဲ့ အမေက ကျွန်မကို အပြစ်မတင်တဲ့ အပြင်ဆူတောင် မဆူခဲ့ပါဘူး ။ လက်ဆစ်ခေါက်သွားတဲ့ ကလေးကို ကျောင်းမလွှတ်ပဲ တပတ်လောက်ဆေးစည်းပေးရပါတယ်။ ဒင်းကလေး လက်ဆစ်ခေါက်ဒဏ်ရာကြောင့် အိမ်မှာရှိနေစဉ်အတွင်း၊ သူ့ဝေယျာဝစ္စလုပ်ပေး၊ သူကြိုက်တာလေးတွေ ၀ယ်ပေးရင်း ၊ တစ်ခါတစ်လေ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး “သားကို တီတီလေးက ချစ်လို့ လုပ်ပေးတာ ၊ I love you “လို့ တိုးတိုးလေးပြောတော့ ၊ ရှေ့သွားကျိုးလေးပေါ်အောင် ပြန်ပြုံးပြရင်း ၊ “တီတီလေးကိုလည်း သားက I love you “လို့ ပါးစပ်ကလည်းပြော လက်ကလေးလေးထောင်ပြလေရဲ့ ။ ဒူးပြဲ ခံရကျိုးနပ်သွားတာထင်ပါရဲ့ အရင်ကလို တီဗွီ ရမု မလုတော့ပါဘူး ။ ဂိမ်းကစားရင် ဗိုလ်လာမကျတော့သလို ၊ ကုန်းလည်း မပိုးခိုင်းတော့ဘူးလေ ။ အရင်က တကျက်ကျက်ရန်ဖြစ်နေတဲ့ တူလေးက အခုဆို ပိတ်ရက်တွေမှာ ကျွန်မနဲ့ အိပ်ယာထဲလာအိပ်တဲ့ အထိတောင် တည့်နေကြပြီပေါ့ ။
တအိမ်လုံး အဆင်ပြေလို့ ပျော်ကောင်းတုန်း ၊ မျက်မုန်းကျိုးနေသူ တစ်ယောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ် ။ ဂွတီး ဂွကျ အစ်ကိုဖြစ်သူပါ ။ စကားကို တိုတိုနဲ့ ပြတ်ပြတ်ပြောတတ်ပြီး ၊ ငယ်ငယ်ကဆို ကြာကြာစကားပြောရင် ငြင်းခုံကြပြီး ခဏခဏ နပမ်းလုံးခဲ့ရဖူးသူပေါ့ ။ လေးနှစ်ကွာပေမယ့် အစနောက်သန်တဲ့ သူ့ကိုလေးစားစရာကောင်းတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ခဲ့သလို ၊ အသက်ကြီးလို့ ရိုသေရကောင်းမှန်း လည်း မသိတတ်ခဲ့ပါဘူး ။ မိန်းမမရခင်ထိ အစနောက်အတော်သန်ခဲ့ပြီး ၊ မကြာခဏဆိုသလို မိဘတွေလစ်လျှင် စရင်းနောက်ရင်းက ထသတ်ကြတဲ့အကြိမ်တွေ ၊ မနည်းပါဘူး ။ နပမ်းလုံးကြရင်း ရေခဲသေတ္တာပိလို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဗျင်းခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးကလည်း ၊ တသက်လုံးမှာ အမှတ်တရပေါ့ ။ ကျွန်မအစ်ကိုရဲ့ အားနည်းချက်က ၊ အရမ်းကပ်စီးနည်းတဲ့ အပြင် မိန်းမကြောက်တာပါ ။ သူ့မိန်းမ မျက်နှာငြိငြင်တာနဲ့ ကမ္ဘာပျက်သလို ပြာယာခတ်နေတတ်သူပေါ့ ။ မိန်းမက သ၀န်အမြဲတိုနေတတ်ပြီး ၊ စစ်လားဆေးလား တစ်ချိန်လုံးလုပ်တာ ခံနေရသူမျိုးပါ ။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံက သူ့မိန်းမကန့်သတ်ပေးသလောက်ပဲ ရှိတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ လောက်အောင်သုံးပြီး ကွန်ပလိန်းတက်လေ့မရှိတဲ့ သူ့ကို ဘေးက အမေနဲ့ ညီမဖြစ်သူက ကရုဏာဒေါသတွေထွက်ကြရပေမယ့် သူကတော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ပါ ။ ဒီလောက်တောင် မိန်းမကြောက်ပြီး ကပ်စီးနည်းတဲ့ အစ်ကိုကို စည်းရုံးဖို့ဆိုလျှင် ၊ ယောက်မကို လက်တလုံးကြားလှည့်ပေးပြီး ၊ အစ်ကိုဖြစ်သူကို ပိုက်ဆံချေးရတော့မယ်ပေါ့ ။ နောက်ဆုံး ဗျူဟာ စခင်းတဲ့ နေ့မှာပဲ အစ်ကို့ဖုန်းကို မက်စေ့ခ်ျပို့ပြီး ၊ စားစရာတစ်ခုမှာလိုက်ပါတယ် ။” ညနေကျလျှင် ၀ယ်ထားပေးပါ နှစ်ဆပြန်ပေးမယ်” လို့ မက်လုံးလေးပါ ထည့်ပေးလိုက်တယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ သုံးနေကြစာကြောင်းလေး I love youလို့ ၇ိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။ ရိုက်သာရိုက်ပေးလိုက်တာ ၊ သူနဲ့က ကြောင်နဲ့ ကြွက်လို ခဏခဏ သတ်နေကြမို့ ၊ စိတ်ထဲတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ပါ ။ သူ့ ဆီကလည်း “၀ယ်ထားလိုက်မယ် …. နှစ်ဆနော် … ဒါနဲ့ ငပေါမ ဘာကြောင်တာလဲ” ဆိုပြီး စာပြန်ရခဲ့တယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ထင်တဲ့ အတိုင်း သူဝယ်ထားပေးပါတယ် ၊ ပြုံးဖြီးဖြီး မျက်နှာကြီးနဲ့ပေါ့ ။ တန်ဖိုးရဲ့ နှစ်ဆအပြင် ပိုတာလေးပါ နည်းနည်းစောင်းပေးလိုက်တော့ ၊ သူအတော်လေး မနောခွေ့သွားတယ် ထင်ပါရဲ့ ” လိမ္မာလိုက်တဲ့ ငါ့ညီမ I love you ” တဲ့ တခွန်းပြောပြီး ရှက်သလိုလိုမျက်နှာပေးနဲ့ ချာခနဲလှည့်ထွက်သွားတယ် ။ အနားမှာ ကြာကြာရပ်ပြီးနေလျှင် ကျွန်မ စိတ်ပြောင်းပြီး ပြန်တောင်းမှာ စိုးလို့ ထင်ပါရဲ့ ။ နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာလည်း သူ့ကို တစ်ခုမဟုတ် ၊ တစ်ခု အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ၀ယ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ။ ပိုက်ဆံတော့ ကုန်ပေမယ့် လိုချင်တာက အေးခဲနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကြား နွေးထွေးမှု တစ်ခုရဖို့မို့ ၊ ဒီလောက်လေးကုန်တာလောက်နဲ့တော့ မပြောပလောက်ပါဘူး ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အစ်ကိုက ယောက်မပေးသလောက်သာ အိပ်ထဲ ထည့်ရာကနေ ၊ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ သွားစရာလာစရာရှိလျှင် ပိုက်ဆံ ချေးတတ်သလို ၊ ပြန်ဆပ်ရိုးလည်း ထုံးစံမရှိပါဘူး ။ အမေနဲ့ ကျွန်မက သိသိကြီးနဲ့ ၀ိုင်းလိမ်ပေးကြပြီး ၊ မိသားစုဝင်တွေကြား ဆက်ဆံရေးတွေ မအေးခဲအောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ ။
အခုဆိုလျှင် ကျွန်မတို့ မိသားစုလေးက အရင်ကလို အေးတိအေးစက်မနိုင်တော့ပဲ လက်ပံပင်ပေါ်က ဆက်ရက်သိုက်လို ကြွက်ကြွက်ညံလို့ပေါ့ ။ ရင်ထဲမှာရှိနေပါလျှက် ထုတ်ပြောဖို့မာနနဲ့အတ္တတွေကြောင့် ၀န်လေးနေမိလျှင် ၊ ဆက်ဆံရေးတွေ ၊ ဝေးကွာသွားရတော့မယ့်အဖြစ်ပါ ။ မိသားစုဝင်တွေကြား မပြောဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကြောင့် ၊ အေးခဲလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မိသားစု ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်နွေးထွေးခဲ့ပြီလို့ညွှန်းရလျှင် ၊ မလွန်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့နော် ။ မိသားစုဘ၀ကို တန်ဖိုးထားကြသူတိုင်း ၊ ပျော်စရာမိသားစုလေးတွေ ဖန်တီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
etone has written 851 post in this Website..
Goooooooooooooooooood4nothing lady !!!
View all posts by etone →
candle . says:
ဒီပို့ စ်လေး တင်ပေးလို့အိုင်လပ်ယူ ပါ အမအိတုန်..
အလေးအနက်ထားသင့်တဲ့ ၅၂၈ ကိုဖော်ညွှန်းလို့ ကျေးဇူးပါ မအိတုန်…။ ၁၅၀၀ ကို ကျနော်တို့ ရွာသူ အပျိုကြီး ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲ သိချင်သား…။ အဟဲ ..:P
မြန်မာမှု ပြုထားတာလေးက ပီပြင်သားပဲ…။ ဒါပေမဲ့ မိသားစုချင်းမှာ ချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့လိုလို့လား ဆိုတဲ့ အတွေးက လူတိုင်းမှာ အခြေခံ ရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့လူမှုစရိုက်ကို ကျော်သွားနိုင်မယ်မထင်ဘူး….။
ဟုတ်ပါတယ် အဘနီရယ် … မိသားစုချင်းမှာ ချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့လိုလို့လား ဆိုတဲ့ အတွေးက လူတိုင်းမှာ အခြေခံ ရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့လူမှုစရိုက်ကို ကျော်သွားနိုင်မယ်မထင်ဘူး….။ ဆိုပေမယ့် …. တချို့ .. တချို့သော မိသားစုတွေအတွက်တော့ ဖွင့်မပြောလည်း နွေးထွေးနေပေမယ့် တချို့တချို့သော မိသားစုတွေကတော့ ဖွင့်ပြမှ ဖြစ်တော့မယ့်အခြေနေရယ်ပါ ။ ကျွန်မတို့ မိသားစုလေးမှာလည်း … ဒီလိုမှ ဖွင့်မပြတော့လျှင် .. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် … တအိမ်တည်းနေပြီး တပတ်နေမှ တစ်ခါ မျက်နှာစုံညီမြင်ရတာမျိုးလောက်တောင်… ဖြစ်တော့မယ့် အခြေနေပါ … ။ မိသားစုဘ၀ကို တန်ဖိုးထားလွန်းလို့ ကြံမိကြံရာ ၊ ကြံစည်မိပါတယ် :harr:
htet way says:
မိသားစုလောက် ဘယ်ကောင်းကင်မှ ကြယ် မစုံဘူးဆရာမလေးရေ
တကယ် အတွေးအခေါ်ကောင်းသူ မေတ္တာဓါတ်ရှိသူတွေသာ ဒီလိုမျိုး
မိသားစု အတွင်းမေတ္တာရင့်ကျက်ဖြန့်ဝေနိုင်မှုကို လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့ တွေ မိသားစုထဲ အချစ်မရှိကြဘူး လိုက်လျှောမှု မရှိကြဘူး
ဒီဆောင်းပါးလေးက သိပ်ကောင်းတဲ့ ပြုပြင်ရေး ဆောင်းပါးလေးပါ။
ကျွန်တော်က သဘောကျမိတယ် ။လေးစားပါတယ်ဆရာမ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အခုတလော Celine Dion ရဲ့ I love you ကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိအခေါက်ခေါက် နားထောင်နေမိတဲ့အချိန်ပါ။ စာသားထက်သူဆိုထားတာနဲ့သံစဉ်ကိုအရမ်းကြိုက်လို့ပါ။ မအိတုံကိုတော့ ယောက်မကိုတောင် I love you ပြောနိုင်လို့ချီးကျူးပါတယ်။ ကျမအတွက်ကတော့တော်တော် ခက်တယ်. အစ်ကိုသုံးယောက်ရှိတယ်. အကြီးဆုံးအကိုကကိုယ့်ထက် ၁၆နှစ်ကြီးတယ်. အငယ်ဆုံးအကိုနဲ့ ၁၀နှစ်ကွာတယ်. အစ်ကိုအငယ်နဲ့ကတော့ တကယ့်ရန်ဖက် အစ်ကိုကြီးကိုတော့ငယ်ငယ်ကမိဘထက်တောင်ပိုချစ်တယ်. သူကယူနီသွားတက်လို့ ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆို တချိန်လုံးသူ့နားပဲနေတာလေ။ ဒါပေမယ့်သေချာတာချစ်တယ် လို့တော့အခုချိန်ထိတခါမှမပြောဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်သူမိန်းမလည်းယူသွားရော လုံးဝကိုမချစ်တော့တာ. အခုဆို ရင်ထဲမှာဘာမှကိုမရှိတော့တာ. ကိုယ်ပဲမနာလိုချင်းကြီးတာလားမသိဘူး။ သေချာတာတော့အဲဒီငယ်ငယ်ကလိုအချစ်မျိုးလုံးဝမရှိတော့တာပဲ။ အစ်ကိုရင်းတောင်အဲလိုဆိုတာ့ ယောက်မဆိုတွေးသာကြည့်.
ယောက်မနဲ့ ကတောက်ကဆလေးတွေတော့ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် လူရှေ့တမျိုး ၊ နောက်ကွယ်တမျိုးပြောတတ်တဲ့ အခါနဲ့ .. ယောကျာ်းကို နိုင်စားတဲ့အခါမှာပါ .. ။ သူလင် ၊ သူမယားတော့ ချစ်လို့ အပြစ်မမြင်ကြပေမယ့် … ကိုယ့်အမျိုးထိတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က ..အ တော်လေး ကိသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေများဆို …. အစ်ကိုက အ၀တ်လျှော်ပေးတာမျိုးတောင် တွေ့ဖူးတယ် … ။ အမေတယောက်တည်း လုပ်နေတုန်းက .. အ၀တ်တောင်ခြောက်လျှင် မရုတ်ပေးဖူးပဲ .. မိန်းမကျမှ လျှော်ပေးတော့ … ကြားထဲက ဒီညီမက ဒေါကီးတာပေါ့ … ။ အရင်ကတော့ မြင်လို့ မကျေနပ်လျှင် ..ကိုယ့်အိမ်ပဲ ဆိုပြီး … ဖိုက်တာလုပ်ပြီးပြောမိပါသေးတယ် .. နောက်ပိုင်း ပြန်တွေးကြည့်တော့မှ …. အဓိကက သူတို့ကြားထဲက ဆက်ဆံရေး ၊ မိသားစုနဲ့ အဆင်ပြေရေးပါပဲလေ … ၊ ယောက်မဆိုတာကလည်း … သျှောင်နောက်ဆံတုံးပါပြီး လိုက်လာခဲ့ရတာလို့ ဖြည့်တွေးပြီး .. ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နည်းနည်း ထားကြည့်တယ် ။ အမေ့အပေါ် သိတတ်တာ မသိတတ်တာ ၊ အစ်ကိုလုပ်တဲ့ လူ ဥာဏ်နည်းလို့ ပဲလို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ် .. ။ ကိုယ့်ဘက်က စပြီး လက်ကမ်း ခဲ့တဲ့အခါ သူတို့ဘက်ကလည်း ကြိုဆိုကြပါတယ် … ။ တမိုးအောက်မှာ နေသူချင်းဆိုတော့ … လိုတိုးပိုလျော့လေး .. ပြန်ချိန်ညှိရတာပေါ့လေ … ။
အဟား….။ အတော်လာတဲ့ အီးတုန်းပေပဲ…။ ငါက ဒီလိုပြောလိုက်ရင် သူကြီးဘယ်လိုများပြောမလဲလို့ ခုတော့ မျှော်တဲ့သူမလာခင် ညည်းက အရင်ဦးအောင်လာတယ် ……….။
အခုလို အကျိုးများစေမယ့် လက်တွေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းကောင်းကို ညွှန်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I love u.
(ရွာထဲမှာနေရင်း ပြောသင့်တဲ့ စကား၃ခွန်းကို သင်ကြားတတ်မြောက်လာလို့ လက်တွေ့လေ့ကျင့်လိုက်တာ။) :hee:
မင်္ဂလာပါ အန်တီမမရေ ….
ရွာထဲကနေ သိလာတဲ့ စကားသုံးခွန်းကို … recovery ပြန်လုပ်ပြီး သတိပြန်ရစေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ကော့မန့်ပေးတဲ့ ရွာသူားများအားလုံးကိုရော ၊ ကော့မန့်မပေးပဲ ပို့စ်ဖတ်သွားတဲ့ လူများကိုရော … ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။ ကော့မန့် တစ်ခုချင်းဆီကို မပြန်ပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ ။
ရွာသူားအားလုံးကိုလည်း ချစ်ပါသတဲ့တော် …… ဟီး :gee:
R Ga says:
သဲရေ မောင် ဒီကနေ့ နည်းနည်းသောက်လာမယ်နော်…။နောက်ကျရင် အပြစ်မပြောနဲ့နော်..။ သဲလေးနေကောင်းပါစေ I Love U….
တူများတွေကတော့ သဲသဲ….ဒီနေ့ သိပ်မသောက်နဲ့နော်…သိပ်လည်းမရယ်နဲ့ ကြားလား I Love U..တဲ့ ဟိဟိ..။
အိပြောနေတယ်နော်..သဲသဲ…။ I Love U
အွန် …. ချစ်သောမောင်
သွေရူးသွေးတန်းနဲ့ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ ခွိခွိ ဘယ်သူကပြောတာလဲအဲ့ဒါ ….?
မချောလေးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက်နဲ့ မူးပြီးပွားနေတာလည်းမမှတ်မိ ….. အိမ်ကလှေခါးကို လေးဘက်ထောက်တက်သွားတာလဲမမှတ်မိနဲ့များ ဟိဟိ
Hnin Hnin says:
လေးနဲ့သူပေါ့..အစ်ကိုတွေ၊မောင်တွေရှိတဲ့ ညီမ၊အစ်မတွေ ယောက်မနဲ့တော့
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲ…တုန်ပြောတာတွေက တိုက်ဆိုင်တော့ ရင်ဖွင့်ပစ်
လိုက်တော့မယ်…း-) …
အရင်တုန်းကတော့ ကိုယ်ကလည်း အငယ်ဆုံးဆိုတော့ စိတ်နဲ့မတွေ့ရင်
အကုန်လုံးကို မြေလှန်ပစ်ချင်စိတ် ပေါက်တယ်(ရှိပေမယ့် မပေါက်ခဲ့ပါဘူး)
ကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ကိုယ် ညီမကို စိတ်ပင်ပန်း၊လူပင်ပန်းဖြစ်အောင် လုပ်နေရ
အစ်ကိုကို့ ဆွေနီးမျိုးစပ်ထဲကနဲ့ ပေးစားထားတာ..မိဘချင်းတိုင်ပင် သူတို့ချင်း
ပေးတွေ့ပြီး အချင်းချင်းလည်း ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ၁လအတွင်း ပေးစားလိုက်
ကြတာ…သူတို့ဖူးစာက တအားမြန်တယ်…ချစ်လိုက်ကြတာလည်း တုန်လို့..
ယောက်မက ချောလည်းချောတယ်..ငယ်လည်းငယ်တယ်ဆိုတော့ အစ်ကိုက
အလိုလိုက်ပြီး ချစ်တယ်..ရသမျှပိုက်ဆံ အကုန်အပ်သလို..စိတ်ခဏခဏ
ကောက်တတ်တာလည်း ချော့ရနဲ့…ကြိတ်ကြိတ်ပြီး နိုင်နေတာ သိတာပေါ့..
ယောက်မ ရတော့မယ်ဆိုတော့ ယောက်မဆိုးဆိုးများလားဆိုပြီး stress
သန့်ရှင်းပြီး ကျန်တဲ့အိမ်မှုကိစ္စ ချက်ပြုတ်၊သန့်ရှင်းရေး ဘာဆိုဘာမှစိတ်
မ၀င်စား ဇိမ်နဲ့နေတာပါ…’လှတာမက်တော့ ညစာခက်’..’ယောကျာ်းပျင်း
ကျောခင်း၊ မိန်းမပျင်း ခြေဆင်း’ ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေလိုပါပဲ….
အိမ်ဖော်မရှိလို့ အိမ်မှုကိစ္စတွေ ကူလုပ်၊ခွဲဝေတာဝန်ယူရမယ် ဖေဖေက
ပြောထားလည်း ဖေဖေက ခရီးသွားသွားနေတာများတော့ မလုပ်ဘူးလေ…
အစ်ကိုက လူပျိုတုန်းက ညီမချက်ထားတာဆို အသားက အချိန်မရလို့
ချက်ချိန်လျှော့ပြီး အိအောင်မချက်လိုက်ရဘဲ နူးနေတာတောင်
(အိမ်က နူးတာထက် အိပျော့နေတာပိုကြိုက်ကြတယ်) မအိလို့ သိပ်မနူးဘူး
ချက်ရင်တော့ ချဉ်ဟင်းရေကြီး(ရေတွေထည့်တာများလို့ အရသာ
မရှိ)လည်း စားတာပဲ…အသားက ဆွဲလိုက်ရင် ဆတ်တောက်၊အမျှင်တန်း
မာနေလည်း စားတာပဲ..’ဟယ်..အသားက မနူးဘူး’ လို့ ပြောမိပါတယ်…
‘ကို…နူးတယ် မဟုတ်လား’..လို့ မိန်းမက တစ်ချက်စစ်ကူတောင်းလိုက်တာ
နဲ့ ‘အင်း..နူးပါတယ်’ ဆိုပြီး ဆက်စားနေတယ်.. ‘သြော်…ညီမချက်တာကျ
တော့ နူးနေတာတောင် မနူးဘူးပြောတယ်…မိန်းမကျတော့ မနူးတာကို
နူးပါတယ်တဲ့…သြော်..မိန်းမ..မိန်းမ’ လို့ပြောလိုက်တော့ ယောက်မက
‘ဟင်း..ဟင်း’ ..သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့မိန်းမရှေ့ဆိုတော့ ‘၀စီပိတ်’
အမြင်ကတ်တယ်… ခုတော့ အိုးခွဲချက်စားနေကြပြီ..မကြာသေးဘူး..
(အိမ်ကပဲကျွေးတာပါပဲး)..) အမေ၊အစ်မ၊ညီမ ချက်ရင်တော့ ကောင်းနေ
လည်း ဂျီးထူတတ်ပြီး မိန်းမချက်ရင်တာ့ ကောင်းကောင်း၊မကောင်းကောင်း
ဟင်းတစ်မျုိးငုတ်တုတ်၊ ဟင်းနှစ်မျိုးငုတ်တုတ်ကိုလည်း အဟုတ်လုပ်ပြီး စားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေပါလို့….
..ကလေးသာ ရသွားတယ်…နှစ်ယောက်စာ ချက်စားတာတစ်ခုပဲ တိုးတက်
ကျန်တာမပြောင်းလဲသေးဘူး…အဲဒါဟာ ‘အိမ်ထောင်သည်တွေရဲ့အတ္တ’ လို့ပဲ
မြင်တယ်..မိဘ၊မောင်နှမထက် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်သည်သာ အရေးပါဆုံးးးး
တူလေးကို (နို့မှုန့်ပဲတိုက်ပေမယ့်) မိခင်ပီပီသသ အိပ်ပျက်ခံ၊စိတ်ရှည်၊ဂရုစိုက်
တာလေးတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…း)…အဲ့လိုဖြစ်ဖို့က တစ်ကယ်မလွယ်ဘူး
ပစိပစပ် မပြောတတ်လို့(ထင်တာပေါ့လေ..သူတို့ကြားလည်းမ၀င်၊မအစ်တော့) ကြိုက်ပါတယ်…စိတ်ကောင်းလည်းရှိလို့ စိတ်တော့ချမ်းသာရပါတယ်…
အဲဒါတွေကြောင့် မုန့်တွေလည်း ၀ယ်ကျွေး၊ အ၀တ်လည်း ဆင်ပါတယ်…
I love you တော့ မပါပါဘူးလို့…း) …
ခုနောက်ပိုင်းတော့ အစ်ကို့ဘက်က မနာတော့ဘူး..၀မ်းလည်းမနည်းတော့ဘူး..
အစ်ကိုဆိုပြီး မချင့်မရဲနဲ့သူ့ဘက်ကနာပေးနေလည်း သူကိုယ်နှိုက်က ကြည်ဖြူ
နေမှတော့ မတတ်နိုင်ဘူး…သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံ…ခံပေတော့ပဲ..း) ..
ဒါကြောင့် သူ့ဘက်၊ကိုယ့်ဘက်ညှိပြီးနေတတ် တာဝန်သိတတ်တဲ့ ယောက်မမျိုးပဲ
ထပ်လိုချင်တော့တယ်..ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ… :ha: …
ရင်ဖွင့်ပြီးရေးသွားတဲ့ ကော့မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ
မိသားစုထဲကို တစိမ်းရောက်လာတာနဲ့ ၊ မိသားစုတွင်းမှာ အနည်းနဲ့ အများ သဘောထားကွဲတာ ၊ ကတောက်ကဆဖြစ်တာတွေကြုံရတတ်စမြဲပါ ။ တချို့မိသားစုတွေမှာ မောင်နှမချင်းတောင် ၊ ရန်သူတွေလို မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ ခုတ်မယ် ထစ်မယ် တဂဲဂဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေ ၊ မေးထူးခေါ်ပြောတောင် မလုပ်နိုင်အောင် နင်နေရသူတွေလည်းရှိတယ် ။ ပြောရမယ်ဆိုလျှင် အိမ်မှာနေနေတဲ့ကိုယ်က အိမ်ရှင်ပါ ၊ အပြင်ကနေ အခုမှဝင်လာတဲ့ လူက ဧည့်သည်ပါ … ။ ဒီတော့ .. လျော့သင့်တာ၊ လျော့တန်တာ လျော့ရမှာ … ကိုယ့်ဘက်ကလိုပဲ စတွေးမိပါတယ် ။ လက်သီးဆုတ်ချင်း လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်လို့ မရသလိုပေါ့ မနှင်းနှင်းရယ် ။ အတူမနေပဲ အိမ်ခွဲနေတယ်ဆိုလျှင်တော့ ၊ ဘာမှ သိပ်မပူရဘူး ၊ မိသားစုနဲ့ တွဲနေတဲ့အခါ ၊ ဒီလို ပြသနာလေးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ် ။ :gee:
နှင်းနှင်းကလည်း ရင်ဖွင့်ပစ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါ…
ပြီးတော့ ယောက်မ မရှိလို့ နောက်ကျောလုံလုံနဲ့ အကြာကြီးရေး လို့လည်း
ရတယ်လေ (PC ရှေ့ထိုင်နေရင် တံခါးပေါက်ကို နောက်ကျောခိုင်းထားရလို့
၀င်လာပြီး ‘တီ..တူ..ခဏထိန်းပေးထားအုံး’ ဆိုတာ ဖြစ်တတ်လို့ သူ့အတင်း
ရေးနေတာ တန်းတွေ့မှာလေ )….
ကလေး ထမင်းကျွေးဖို့ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီး သူ့အမေဆီ ပြန်နေတာကြာပြီ..
ပြန်မလာခင်လေးအမီပဲ ရေးလိုက်ရတာ.. ..၄လအထိ သူ့အမေ
ဆီမှာပဲ နေတာလေ…မခိုင်အမေလို တစ်ပုံစံထဲတူတဲ့ အမေပေါ့…မွှေမယ့်
တူလေး မရှိ၊ငြိမ်းနေတာကြာတော့လည်း စိန်မျောက်မျောက်ကို လွမ်းမိပါရဲ့.. :-]
ွှThanks again. Luv♥ ya. :smile:
I Love U တဲ့ ဘယ်တော့မှ နားထောင်ရတာ မရိုးသွားနိုင်တာ ဒီစကားလေးပါ ….
ပိုစ့်ရေးတဲ့ သူရော ပိုစ့်ကိုဖတ်သွားတဲ့သူတွေရော ကိုယ့်ကိုပြောစေချင်တဲ့သူဆီက
ဒါနဲ့ …. စကားအတင်းစပ် etone ရေ ဒီစကားလေးကို ကြေးအိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြိးကို
အမြဲပြောလားဟင် … သိချင်လို့ပါ … စပ်စုတယ်ထင်နဲ့နော် … ဟိဟိ …
No! ပါချင် … ဒါကြောင့် ပထမကော့မန့် စာမျက်နှာမှာ … လာပေါက်ကွဲ ပြထားသေးတယ်လေ … ခွိခွိ ။
နာ့ကိုများ … မိန်းမ မဆန်ဘူးလေး ဘာလေး .. နဲ့ ….. ။ ယောက်မ မြင်းစီးထွက်ပြလိုက်မှ …. ဟီး :harr:
“ဖတ်ရွေး အဖွဲ့ ကိုယ်စား”
မိမိ ပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် နွေးထွေးစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ဖြစ်နိုင်တာလေးကို ကိုယ်တွေ့နဲ့ ရေးသွားတာကို နွေးနွေးထွေးထွေးဖတ်ရလို့ နှစ်ခြိုက်မိပါသည်။
နေ့စဉ် ပုံမှန် အလုပ်များနဲ့ လုံးထွေး နေရင်း မိသားစု နဲ့ နွေးထွေး ရင်းနှီးမှု မသိမသာ အေးစက်လာတာကို ပြန်လည် နွေးထွေး မှုရစေဖို့ လုပ်ရတာ မခက်ခဲ ဘဲ အစွမ်းထက် တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း လေး ပေးတဲ့ လေးမို့ နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။
တစ်ဆင့်ကြားသိတဲ့ နည်း ကို ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံး ပြခဲ့ပုံအကြောင်း အရေးအဖွဲ့ လေးကလဲ အင်မတန် ချစ်စရာပါဘဲ။
တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ကြင်နာဖေးမခြင်း က ရတဲ့ ပီတိဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် စွမ်းအား ရှိတာကိုလဲ
ခံစားမိတဲ့ အသိလေးဝင်သွားမိတာကြောင့် ဒီ ကို အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးပါတယ်။
မိသားစုဝင်တွေကြား အေးခဲနေမှုလေးတွေ ပြေပျောက်စေမယ့် ကိုယ်တွေ့ ကြိုးပမ်းချက်လေးက လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ တိုက်တွန်းချက်ကလေးပါ။
You need to be logged in to view your points.
Thint Aye Yeik on အရောငျရငျ့မှတျတမျး Bold News August 2019
kai on အရောငျရငျ့မှတျတမျး Bold News August 2019
Shar Thet Man on စာအုပ်ဆိုင်လိုလို..စာကြည့်တိုက်လိုလို
aye.kk on စာအုပ်ဆိုင်လိုလို..စာကြည့်တိုက်လိုလို
Thint Aye Yeik on ဘာတွေပြောကြမလဲ သိချင်သား….
Mg Yit Htoke on ဘာတွေပြောကြမလဲ သိချင်သား….
Shar Thet Man on ဘာတွေပြောကြမလဲ သိချင်သား….
Shar Thet Man on မွန်လေးဟုခေါ်သည်..
aye.kk on မွန်လေးဟုခေါ်သည်..
Mg Yit Htoke on မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့သငျပုနျး – ဇူလိုငျ ၂၀၁၉
Shar Thet Man on Korea သွားစရာမလိုဘဲ Korea အကင်စားချင်ရင် Ko’s Food ကိုသွား
aye.kk on Korea သွားစရာမလိုဘဲ Korea အကင်စားချင်ရင် Ko’s Food ကိုသွား
Shar Thet Man on Learning to Write in English – Prof: Myo Kyaw Myint
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10
Anzartone (95612 Kyats )
kyeemite (93468 Kyats )
weiwei (84008 Kyats )
Shar Thet Man (82058 Kyats )
SP (81496 Kyats )
blackchaw (79595 Kyats )
padonmar (79512 Kyats )
monmon (62359 Kyats )
aungmoethu (61137 Kyats )
Foreign Resident (60269 Kyats )
Zawgyi/Myanmar3Font
Download MM3 Font for Windows OS
Download MM3 Font for Mac OS
Myanmar Typing Tutor
Download Whizzo Myanmar Typing Tutor
Samsung Cell V6,7.0
exe file download MSTYGN
Download Alpha Zawgyi for Windows 7, 8 (64 bit)
NamKhone Grand Font – InDesign